यो संसार कहिले अन्त्य हुनेछ ? | रेमा साहित्य वितरकहरू
यो प्रश्नको जवाफ दिनलाई एकमात्र योग्य अधिकारी, परमेश्वर, उहाँका विश्वासयोग्य अगमवक्ताहरू मार्फत बोल्नुभएको छ, र उहाँको बोली लेखिएको छ र एउटै पुस्तक, बाइबलमा रचना गरिएको छ (मत्ती २४:३६) । यहाँ हामी बाइबलअनुसार यो प्रश्नको जवाफ दिनेछौं र कसरी यो वर्तमान संसार अन्त्य हुनेछ भनी हेर्नेछौं ।
सृष्टि बारे परमेश्वरको उद्देश्य
हामीले यो कहिले अन्त्य हुनेछ भनी हामीले बुझ्न सक्नुअघि स्वर्ग र पृथ्वीलाई परमेश्वरले किन सृष्टि गर्नुभयो भनी बुझ्नैपर्छ । सृष्टिमा परमेश्वरको उद्देश्य उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको, जीवन हुनुहुने उहाँले भरिएको, उहाँलाई अभिव्यक्ति गर्न र सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि उहाँको निम्ति शासन गर्न सामूहिक मानिसझैँ निर्मित मानिसहरूको समूह पाउनु हो (उत्पत्ति १:२६) । यसले हामीलाई सङ्केत गर्दछ कि यो संसार यो सामूहिक मानिस निर्मित नभइकन अन्त्य हुनेछैन (एफिसी ४:१२) । परमेश्वरले अझैँ यो उत्कृष्ट कृतिमाथि काम गरिरहनुभएको छ, र तपाईं यसको भाग हुन सक्नुहुन्छ (एफिसी २:१०) ।
पृथ्वी उपयोग भइरहेको छ
ब्रह्माण्ड अत्यन्तै प्राचीन छ । एउटा हालको ठम्याइ यो हो कि ब्रह्माण्ड १३.८ करोड वर्ष अघि सृष्टि गरियो । परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभए पश्चात, मानिसले पृथ्वीका स्रोतहरू प्रयोग गरिदै आएको छ । विगतको शताब्दीमा, यी स्रोतहरूका मानिसको उपभोग ती चाडै नै क्षीण हुने बिन्दुसम्मै, नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यदि उपयोग यसको वर्तमान दरमा जारी राख्छ भने, हाम्रो खर्च गर्न सक्ने सञ्चय गरेको बेला अर्को शताब्दीसम्मै रहिरहन नसक्ला । ओजोन् तहमा भएको अन्तरालको प्वालहरू नाटकीय रूपमा न छालाको क्यानसरको दुर्घटना वृद्धि गर्न सक्छ । हरितगृह ग्यासहरू वायुमण्डलमा बढिरहेका छन्, त्यसैले भूगोल झन् तातो बनिरहेको छ, र मौसमका ढाँचाहरू अझ बढी खडेरीहरू, आगोहरू र बाढीहरूसहित, परिवर्तन भइरहेका छन् । विषम मौसमी घटनाहरू जस्तै आधीँबेहरीहरू र तूफानहरू अझ बढी बारम्बार र कठोर बनिरहेका छन् । वनजङ्गल घटिरहेका छन्; वन्यजन्तुको निम्ति कम बासस्थान र अक्सिजन उत्पादन गर्न कम वनस्पति हुनेछ । समुद्री तहहरू बढिरहेका छन् र सयौं लाख मानिसहरूद्वारा बसोबास गरिएका समुद्र तटीय भूमिहरू ढाकिरहेका छन् । भूमिगत जलाघर क्षेत्रीय तहहरू घटिरहेका छन्, जसले ज्यादै खाँचो परेका ताजा पानीको कमी तुल्याइरहेका छन् । रासायनिक र आणविक फोहोरहरू हाम्रा ताजा पानीका स्रोतभित्र र समुद्रभित्र चुहिरहेका छन् । हावा हरेक सेकेण्ड दूषित भइरहेको छ, जसले धेरै सहरी क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै कठोर श्वासप्रश्वास समस्याहरू तुल्याइरहेको छ । विश्वको जनसंख्या बहुगुणित तवरले विस्फोट भइरहेको छ । बाँच्नको निम्ति चाहिने खाद्यान्न र अरू अत्यवश्यक कुराहरूको आपूर्ति हाम्रो वा हाम्रा बालबच्चाको जीवनकालमा माग एकदमै बढिरहेका हुन सक्छन् । मुख्य आणवीक टक्करबिना नै, पृथ्वी ३० देखि ५० वर्षमा आज हामीले बसोबास गरेको गृहझैँ उस्तै हुनेछैन । बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि एक दिन जलाइने पुरानो लुगाफाटा जस्तै च्यातिनेछ (हिब्रू १:१०–१२; २ पत्रुस ३:१२) ।
संसारका अन्त्यका दिनहरू
बाइबलले संसार कहिले अन्त्य हुने भनी बताउदैन । हामी त्यो घडी वा दिन जान्दैनौं (मत्ती २५:१३), तर यसले संसारका अन्त्यका दिनहरू कस्तो हुनेछ त्यस बारेमा चाहिँ बताउँदछ । अन्तिम दिनहरूमा, युद्धहरू, युद्धका अफवाहहरू, भोकमारी, र भूकम्पहरू हुनेछन् (मत्ती २४:६–७) । अन्तिम दिनहरूमा बढ्दो व्यवस्थाहीनताका परिवेश हुनेछ (मत्ती २४:१२) । परमेश्वर र अरू मानिसहरूका निम्ति धेरै मानिसहरूका प्रेम चिसिनेछन् (मत्ती २४:१२) । जिन्दगी धेरै चिन्ताहरूले भरिनेछन् र यी कुराहरूको कारणले गर्दा मानिसहरूले यी चिन्ताहरूबाट उम्किने कोशिश गर्न अत्यन्तै यो सबै किसिमका कामुकता र पियक्कडपनमा सहभागी हुनेछन् (लूका २१:३४) । बाइबलले संसारको अन्त्य नभइञ्जेल चार–घोडाहरूको दौडको उदाहरण पनि दिँदछ (प्रकाश ६:१–८) चार घोडाहरू सुसमाचार, युद्ध, भोकमारी, र मृत्यु हुन् । यो दौड जारी राख्नेछ र तीब्र पनि हुनेछ । यी कुराहरूमध्ये कुनै पनि त्यसै जानेछैन । र यी कुराहरू सुधार हुनेछ भनी मानिसहरूले जति आशा राख्छन्, त्यति नै ती कुराहरू सुध्रिनेछैन तर झन् खराब हुनेछन् ।
संसार अन्त्य हुने तरिका
तैपनि बाइबलले हामीलाई संसार कसरी अन्त्य हनेछ भनेर बताउँदछ । यहाँ मुख्य विषयहरू छन् । संसारको अन्त्य अघि अन्तिम सात वर्षहरू प्रत्येक साढे तीनको दुई खण्डहरूमा विभक्त गरिन्छन् । पहिलो साढे तीन वर्ष शान्तिमय हुनेछ । त्यो अवधिको अन्त्यमा, परमेश्वरले जीवन हुनुहुने उहाँले भरिपूर्ण सामूहिक मानिस उत्पादन गर्नुको उहाँको काम सिध्याउनुभएको हुनेछ (प्रकाश १२:५) । यी मानिसहरू विजेताहरू हुन् । त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई स्वर्गमा लानुहुनेछ । त्यहाँ तिनीहरूले दियाबलस, शैतानलाई पराजित गर्नेछ र पृथ्वीसम्मै खसाल्नेछ (प्रकाश १२:९–११; १४:१) । त्यसपछि अशुद्ध आत्मा खीष्ट–विरोधी भन्ने दुष्ट मानिसभित्र पस्नेछ, र शैतानले उसलाई त्यसको शक्ति दिनेछ (प्रकाश १३:२) । यो संसारको अन्तिम साढे तीन वर्षमा शुरु हुनेछ । बाइबलले यो अवधिलाई महासङ्कष्ट भन्दछ (मत्ती २४:११) । त्यो समयमा पृथ्वी यस्तो ठाउँ हुनेछ जहाँ कोही पनि जिउन चाहनेछैन (प्रकाश ३:१०) । ख्रीष्ट–विरोधीले मानवतालाई ज्यादै विनाश गर्नेछ, र उही समयमा, धेरै प्राकृतिक र असाधारण विपत्तिहरू हुनेछन् (प्रकाश ११:१३) । साढे तीन वर्षको अन्त्यमा, ख्रीष्ट र उहाँका विजेताहरू अमार्गेडोन भन्ने ठाउँमा ख्रीष्ट–विरोधी र त्यसका सेनालाई कुल्चन स्वर्गबाट ओर्लिआउनेछ (प्रकाश १६:१६; १९:१३–१६; १७:१४) । त्यसपछि परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा ल्याउनेछ, र शैतानलाई हजार वर्षको निम्ति थुनिनेछ (प्रकाश २०:२) । हजार वर्षको अन्त्यमा, शैतानलाई केही समयको निम्ति रिहाइ गरिनेछ । त्यसले अझ बढी विनाश गर्नेछ, तर त्यसपछि त्यसलाई अग्निकुण्डमा फालिनेछ (प्रकाश १९:२०; २०:१०) । शैतान र त्यसका सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई सदाको निम्ति न्याय गरिनेछ । तर परमेश्वरतर्फ फर्किनेहरू र परमेश्वरले भरिन खुल्ला हुनेहरू नवीकरण गरिएको पृथ्वीमा अनन्तताको निम्ति परमेश्वरमा र परमेश्वरसित जिउनेछ (प्रकाश ११:१५) त्यहाँ हर्ष, शान्ति, र धार्मिकता हुनेछन् (प्रकाश २२:३, ५) । त्यहाँ कुनै आँशु, अभाव, बिरामी, चोरी, अधार्मिकता वा मृत्यु हुनेछैन (प्रकाश २१:३–४) ।
यदि तपाईं महासङ्कष्टबाटको अवधिमा संसारको अन्त्यमा आइरहेको निर्जनताबाट उम्किन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आज नै परमेश्वरतिर फर्किन र उहाँ र उहाँको मुक्तिलाई ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ (मत्ती ४:१७; एफिसी ३:१८–१९; यूहन्ना १०:१०) । यदि तपाईं शैतानको विनाश र परमेश्वरको न्यायबाट उम्किन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई निम्नानुसार प्रार्थना गर्न उत्साह दिन्छौंः
“हे प्रभु येशू! मलाई शैतानको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा सार्नुहोस् । म अनन्तकालसम्म तपाईंमा र तपाईंसँगै जिउन चाहन्छु । मेरो जीवनझैँ मभित्र अनउनुहोस् । मलाई अहिले नै तपाईंको खाँचो छ ताकि म तपाईंको मुक्तिभित्र प्रवेश गर्न सकूँ ।”
परमेश्वर मानवजातिको निम्ति उहाँको योजना बारेमा अझ बढी थाह गर्न, कृपया हाम्रो वेवसाइटमा जानुहोस्ः